Vertical Francis Turbine ho an'ny tobin'ny herin'aratra antonony sy lehibe, China Vertical Francis Turbine ho an'ny tobim-pamokarana herinaratra antonony sy lehibe mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - HNAC Technology Co., Ltd
Home>Mpanome vokatra>Fitaovam-pitaovana mekanika sy elektrika feno>Turbine hydraulic
Ny turbine hydraulika dia milina herinaratra izay manova ny angovon'ny rano ho angovo mekanika mihodina. Ny turbine Francis dia afaka miasa amin'ny haavon'ny rano 20-700 metatra. Ny herin'ny vokatra dia manomboka amin'ny kilowatts maromaro ka hatramin'ny 800 MW. Izy io dia manana ny sehatra fampiharana midadasika indrindra, miasa maharitra ary fahombiazana ambony.
Ny turbine Francis dia mizara roa: ny Francis mitsangana sy ny Francis horizontal.
Ny turbine Vertical Francis dia manana fahombiazana ambony kokoa noho ny turbine marindrano, izay manana fahamarinan-toerana tsara kokoa. Ho an'ny turbine lehibe kokoa, misy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny fiasana ny vibration, fa ny turbine mitsangana kosa manana fahamarinan-toerana tsara kokoa.
Ny HNAC dia mamatsy ny turbine Francis mitsangana hatramin'ny 150 MW isaky ny vondrona, izay matetika ampiasaina amin'ny turbine mifangaro mikoriana antonony sy lehibe.
Ny famolavolana manokana amin'ny teknolojia manara-penitra dia manome fahombiazana ambony indrindra, androm-piainana lava indrindra ary miantoka ny tombom-barotra miavaka.